Umthelela WeGoing Global ngohlelo lwakho lokusebenza lweselula | Martech Zone
Umthelela wokuhamba komhlaba wonke ngohlelo lwakho lokusebenza lweselula
NgoLwesibili, ngo-Mashi 22, i-2016 NgoLwesibili, ngo-Mashi 22, i-2016 Douglas Karr
Ngezilimi eziyi-7,000 emhlabeni kanye nokukhula emhlabeni jikelele kwezinhlelo zokusebenza zeselula, kungenzeka ukuthi uzithengise ufushane uma uya emakethe ngohlelo lokusebenza olungakusekeli ukwenziwa kwasendaweni… okwenziwa kwasendaweni. Kuyathakazelisa ukuthi izinhlelo zokusebenza zeselula ezisekela isiNgisi, iSpanishi nesiMandarin Chinese, zingafinyelela uhhafu womhlaba
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ama-72% wabasebenzisi bohlelo lokusebenza akuzona izikhulumi zesiNgisi zomdabu! Uhlelo lokusebenza u-Annie itholakale lapho uhlelo lokusebenza lweselula lwenzelwe izimakethe zamazwe omhlaba, kuholele ekungenisweni kwemali engu-120% nokulandwa okungaphezulu okungu-26% ngaphezulu kukonke. Leyo yimbuyiselo enhle ekutshalweni kwemali yokufaka ikhono lokwakha kwasendaweni nokusekela izilimi ezahlukahlukene zisuka.
Le infographic evela ku-Tihlawulwe ngabantu incoma ukuthi izinkampani zicwaninge amazwe lapho uhlelo lwazo lokusebenza luzoqhudelana khona, lwamukeleke ngokwamasiko, futhi luthengiswe kahle izethameli. I-infographic ineseluleko esihle sokumaketha uhlelo lwakho lokusebenza lweselula esifundeni futhi ngokusesha nangeziteshi zenhlalo ngoba ezinye zezimakethe azitholakali.
Tags: uhlelo lokusebenza annieamazwe omhlabaizilimikwasendaweniuhlelo lokusebenza lweselulaukulandwa kohlelo lokusebenza lweselulaukulandwa kwesicelo seselulaIzinhlelo zokusebenza zeselulaizilimi ezithandwa kakhuluukuhumusha ngabantuukuhumusha